Xitaa masjidka Nabiga Salalaahu caleyhi wasalam meysan ka tagin in ay qarax ka sameeyaan. - iftineducation.com
iftineducation.com – Xitaa masjidka Nabiga Salalaahu caleyhi wasalam meysan ka tagin in ay qarax ka sameeyaan. Ilaheyoow mid walba masjidka Nabiga SCW shar la raba cadaabtaada u dej deji  @RaaliahoownabialloowMohammedSCW
Telefishinka afka carabiga ku hadla ee Al-Carabiya ayaa goor dhow shaaciyey in qarax xoogan uu ka dhacay magaalada barakeysan ee Madiina Al-Munawara gaar ahaan meel ku dhow masjidka barakeysan ee nebi Muxamed NNKH. Al-Carabiya ayaa intaa ku dartay in labo qarax laga maqlay saldhig ay leeyihiin ciidanka ilaalada masjidka nebiga ee magaalada Madiina, waxaana la rumeesan yahay in uu qaraxa ka dambeeyay nin waxyaabaha qarxa isku soo xiray. Inta la xaqiijiyay afar qof ayaa ku dhintay qaraxa ka dhacay meel ku dhaw Masjidka Nabiga NNKH ee magaalada Madiina, waxaa sidoo kale jira dhaawacyo inkastoo aan si rasmi ah loo heyn tirada rasmiga ah. Sidoo kale Qarax kale oo ismiidaamin ahaa ayaa isna goor dhow ka dhacay magaalo lagu magacaabo Qatif oo ku taalla bariga wadanka boqortooyada Sacuudiga. Goob joogayaal ayaa sheegay in qof dhexda ku soo xirtay waxyaabaha qarxa uu isku qarxiyey degaan ganacsi oo ku yaalla galbeedka magaalada Qatif. Goob jooge ayaa u sheegay wakaalada wararka ee AFP inuu arkay meydka qof isqarxiyey oo yaalla wado laami ah. Goobta uu qaraxan ka dhacay ayaa sidoo kale ku dhow masaajid ay shiicada sacuudigu ku cibaadeystaan oo ku yaalla magaalada Qatif. Saaka ayey aheyd markii nin mineysan uu isku qarxiyey qunsuliyada Maraykanku ku leeyahay magaalada Jeddah ee wadanka Sacuudiga, ninkii qaraxa waday keligiis ayaana ku dhintay halkaas, labo askari oo ilaalo ahaana dhaawacyo fudud ayaa soo gaaray. Lama oga khasaaraha ka dhashay qaraxyada ka dhacay caawa magaalooyin ka tirsan Sacuudiga dowlada wadankaasna illaa hadda war kama soo saarin.
Galmada Yaa Ugu Fiican Naagaha buuran iyo kuwa caatada ah